Microsoft yakaendesa: inotangisa .NET Core uye Visual Studio Code yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Imwe nguva yapfuura Microsoft yakashamisa vazhinji nekuzivisa iyo .NET kuburitswa, kana padivi pake, uye chokwadi ndechekuti kunyangwe hwaro hwekuti izvi zvaizove zvakanyatsotsanangurwa zvakajeka, pakanga pasina vashoma vakaratidza kusahadzika kwavo kwese. Zvichida uchifunga zvakanyanya nezve chinzvimbo chekare chekambani yeRedmond zvine chekuita neLinux uye yakavhurwa sosi mune zvese, nekusiya parutivi mapurojekiti akasiyana arikuitwa nesoftware yemahara sechinangwa uye zvakare senzira yekuzvizadzisa.
Zvakanaka, panguva yechiitiko Vaka2 2015 iyo yakaitika mumaawa ekupedzisira paMoscone Center muSan Francisco, Microsoft yakazivisa kuburitswa kweiyo .NET Core yekutarisa yeLinux uye Mac OS X, nokudaro zvichizadzisa izvo zvakavimbiswa mwedzi mishoma yapfuura. Ndiyo yekutanga vhezheni iyi inowanika papuratifomu isiri Windows, uye muenzaniso wakajeka wekuvhurwa mumitemo yekambani, kunyangwe hazvo mukufamba uku kune zvimwe zvinoda kugadzira nzvimbo nyowani dzekukwikwidza.
Nekuda kwesarudzo iyi, .NET Core kodhi yave kuwanikwa paGitHubkwayakatorwa ichibva MS Opentech, yaive nzvimbo yekuti kusvika nguva pfupi yadarika vaifanira kuratidza yakavhurwa sosi mapurojekiti. Iri idanho rekutanga rakakosha, uye sezviri pachena harisi iro rega kubva nhasi yayo Visual Studio Code IDE yeLinux uye Mac OS X mapuratifomu akaunzwawo.
Website: Visual Studio Code /..NET Core (GitHub)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Microsoft yakaendesa: inotangisa .NET Core uye Visual Studio Code yeLinux
Hapana + hapana = hapana! Paunoona Visual Studio .NET inomhanya paLinux (yakafanana neMonodevelop) ipapo pamwe uchanditenda chimwe chinhu - chinangwa chakanaka kubva kuMicrosoft!?
Willy klew akadaro
Ini ndinofunga kuti gare gare tichava neVisual Studio ne .NET ichishanda zvakanyatsonaka, pachokwadi paine kubatana pakati paDe Icaza neMS kwenguva yakareba kuti usvike ipapo.
Kufanana nekambani chero ipi, Microsoft inotsvaga kuita mari saka haisi yekuvashandura kuva vatsvene nehusiku, asi zviri pachena kuti maitiro avo haazi ezvekupedzisira '90s uye kutanga kwezana rino. Zvimwechetezvo, ndinofunga vanozviita muchidimbu nekuda kwekukosha sezvo ivo varasikirwa nenzvimbo yakakosha yavaive nayo panguva iyoyo, uye nhasi vari kumashure kumashure kweApple neGoogle.
Pindura Willy Klew
Iwe unofanirwa kurwara nemuviri wese kushandisa akavhara microsoft zvirongwa zvinoda kuiswa nemidzi mvumo kana ndezvekuti zvinoshanda mumba memushandisi pasina kuiswa kuburikidza nehurongwa mafolda?
Kusvikira yave yakavhurwa sosi uye nharaunda ichikanda maziso ayo pairi kwenguva yakareba kwazvo yekuongorora, haisi yekupa chero chinhu kukambani, iri mune iyi Microsoft, asi inogona kuve chero imwe ... kusanganisira google.
Chokwadi vanoshanda mumashandisi emafaira, haufanire kunge uri mudzi wekumisikidza Visual Studio Code. Izvi zvakafanana zvinoitika neApple Studio, chishandiso cheGoogle chekuvandudza Android maapp.
Danilo Hidalgo Vicencio akadaro
Visual Studio Code mupepeti uye kwete IDE hapana nzira yekugadzira mapurojekiti kubva pakutanga, chinhu chinowanikwa muVisual Studio (iyo vhezheni inomhanya chete paWindows)
Pindura kuna Danilo Hidalgo Vicencio
Washington Indacochea D. akadaro
Kutenda neichi chitsva
Pindura Washington Indacochea D.
Luciano Rodriguez muchengeti wemufananidzo akadaro
muchokwadi, ndeye mahara software: https://github.com/Microsoft/vscode/ pasi peMIT
Pindura kuna Luciano Rodriguez